Udokotela wezifo zamehlo - kudokotela wamehlo okunethiwethi kuyafana, noma ngaphezulu nje - udokotela wamehlo. Likhono udokotela kuhlanganisa uphethwe, ukwelashwa kanye nokuvimbela izifo iso.
Isibalo pathologies amehlo, ngeshwa, siyakhuphuka, futhi isizathu salokho - i uhlobo okwandisa amehlo, ngakho odokotela yalesi okukhethekile kuyinto adume. Cishe noma yimuphi umsebenzi namuhla kudinga iqhaza uhlaka umbono, ngakho indima yakhe akunakwenzeka ukulinganisa.
Uhlu izifo ezihlobene emkhakheni wezifo zamehlo, lide ngokwanele. Lezi zihlanganisa hhayi ukwephula kuphela ehlangene Ukuwohloka acuity ezibukwayo, kodwa futhi ezihlukahlukene izinqubo ukuvuvukala, ezifana blepharitis, conjunctivitis, keratitis, kanye nesimo esibuhlungu.
Wonke umuntu uyavuma ukuthi udokotela ohlinzayo iso - ingenye esinzima kunazo emisebenzini yezempilo. Umsebenzi microsurgery kule ndawo wezokwelapha lihlotshaniswa zinamandla ephakeme futhi kudinga kadokotela ukunakwa, okuhlushwa namakhono sina.
Udokotela wezifo zamehlo - ongudokotela kumelwe abhekane kwezinye izindawo zokwelapha, njengoba imbangela eziningi izifo ocular kukhona pathologies ezifana nomfutho wegazi ophezulu, isifo sikashukela, isifo so-renal, kanye yegilo.
Namuhla wadala eningi engomahamba futhi izikhungo ukuthi Uthola odokotela abaqeqeshiwe, kuhlanganise ophthalmologist zezingane. Namuhla bamehlo babe ezobuchwepheshe zanamuhla nezindlela imishini eqondile ngokuvumela hhayi kuphela okuyikona, kodwa futhi ngempumelelo ukufeza imisebenzi eziyinkimbinkimbi.
Noma yimuphi zamehlo Centre has ku arsenal of ekhethekile yokusebenza amathebula, imishini laser, nangezibonakhulu kuhlinzwa, ngobuciko amathuluzi okubona, amathuluzi microsurgical: imimese, izinaliti, sikelo nokuningi.
Udokotela wezifo zamehlo - udokotela odinga izigidi zabantu nearsighted. Kubo, thatha izibuko noma ama-contact lens, futhi uma kungenzeka, afeze ukusebenza esheshayo nephumelelayo, okwenza kungabi nemibi elihlobene ne myopia.
Njengoba wazi, abantu abaningi ngeminyaka eba ezikude, lapho kunzima ukugxila eduze izinto umbono. Kwaba udokotela wamehlo kuzokusiza ukhethe izibuko, ukuze unike amandla umuntu kwamandla ufunde futhi udlulise lo msebenzi ngezinto ezincane.
Esikhathini sethu, amaphesenti okusezingeni eliphezulu nenselelo yalezo zifo ezibucayi okuholela ebumpumputheni, ezifana cataract futhi glaucoma. Lezi zifo ezithinta abantu abadala, abenze olungenakuzisiza namanje okhuthele ubudala. Ngenxa yokwelashwa ngesikhathi esifanele olandelanayo noma kuhlinzwa, eyenziwa udokotela ohlinzayo-ophthalmologist, iziguli cataract kancane noma ngokuphelele ukubuyisela umbono.
Esinye sezifo esikhohlisayo kakhulu iso - kuyinto glaucoma okuholela ebumpumputheni. Bamehlo ukweluleka abantu Usufike iminyaka engu-40, njalo ngonyaka ukuhlola amehlo ngoba i-glaucoma, ngoba lapho usukhulile kwandisa ingozi yokuba lesi sifo. Futhi kulokhu, angasiza uphethwe yini futhi ukwelashwa esifike ngesikhathi. Udokotela wezifo zamehlo - udokotela, okuyinto edingekayo hhayi kuphela iziguli, kodwa futhi abantu kunemibandela enempilo. Ngaphandle kudokotela wezifo zamehlo akunakwenzeka ukuthola izincwadi zokushayela noma ukuthola umsebenzi. Examination ngudokotela iso likhona zonke ukuhlolwa kwezokwelapha, kuhlanganise sokukhulelwa.
Indlela ukwehlisa izinga lokushisa futhi ube nempilo
Phenotype - uphawu emzimbeni noma amathonya kwemvelo?
Uju massage Izibuyekezo okuqukethwe omuhle ufanelwe by kwesokudla
Isibhedlela sezingane ka Infectious Diseases, ikheli Krasnodar, ukubuyekezwa
Dolihotsefalicheskaya ikhanda umumo: kuyinsakavukela pathology
Zokupheka Dinner party sokudla okwehla esiphundu
IsiShayina Tablet Hyundai A7hd - Nakekela imizwa yakho.
A. A. Grechko, Marshal zaseSoviet Union ngaphandle kokuphazanyiswa: Biography nesithombe
"Alexandros Ihhotela 4" ukuze neCorfu - izithombe, amanani, kanye nokubuyekeza zezivakashi ezivela eRussia
Izimpophoma Underwater - isimangaliso bemvelo
Conjunctivitis okunobuthi - incazelo isifo